🥇 ▷ Soo dejiso Samsung Galaxy S9 iyo Galaxy S9 Plus USB Drivers ✅
Soo dejiso Samsung Galaxy S9 iyo Galaxy S9 Plus USB Drivers
Bishii hore, Samsung waxay soo saartey aalad cusub Galaxy S9 iyo S9 oo lagu daray MWC 2018. Galaxy S9 / Plus waa casriga casriga ah ee Galaxy Marka lagu daro, labada aaladaha waxay ku qalabeysan yihiin qulqulatooyin kaladuwan oo isbeddela iyo waxbadan. Isticmaalayaal badan ayaa durbaba jecel qalabkan waxayna horay u dalbadaan iibsashada sida ugu dhaqsaha badan. Maanta waxaan wadaageynaa waxyaabaha ugu muhiimsan ee lagula talinayo in lagu hayo Samsung Galaxy S9 iyo Galaxy S9 Plus Darawalka USB.
Samsung Galaxy S9 iyo Galaxy S9 Plus USB Drivers
Waxay bilaabeen inay horumariyaan qaabab badan, habab xidid, Soo-kabashada TWRP iyo wixii intaa ka badan, laakiin haddii aad rabto inaad ku rakibto soo kabashada TWRP markaa waxaad u baahan tahay inaad ku rakibto darawallada USB kombiyuutarka. Marka maqaalkan, waxaan ka wada hadli doonaa darawallada USB iyo sida si fudud loogu rakibo Samsung Galaxy S9 iyo Galaxy S9 Plus USB Drivers. Haddii aad rabto inaad qabato hawlgallo muhiim ah sida soo dejinta / soo dejiso firmware, rakib TWRP soo kabashada, xididka, rakibida ROM-yada caado ama wax kasta oo ay ku qaadanayso inaad ku xirto fiilada USB-ga kombiyuutarka / laptop. Darawal USB ah ayaa looga baahan yahay inuu qalabkaaga ku xiro kombuyuutarka. Marka soo dejiso Samsung Galaxy USB S9 xakamaynta ama Galaxy S9 Plus USB Drivers.
Waxa kale oo laga yaabaa inaad xiiseyneyso: USB Adb iyo darawallada Flashing ee dhammaan aaladaha Android.
Wadayaasha USB-ga ee Samsung Galaxy S9 iyo S9 Pro:
Waxaad dhibaato ku qabtaa isku xirka xarkaha USB-ga ama waxaad dooneysaa inaad rakibto darawalada USB ee ugu dambeeyay Samsung Galaxy S9 iyo Galaxy S9 Plus, markaa boostadan adiga ayaa iska leh. Qoraalkan, waxaan kugu hagi doonnaa inaad kala soo baxdo oo aad ku rakibto nooca ugu dambeeya Samsung Galaxy S9 iyo Galaxy S9 Plus USB Drivers. Iskuxirka soo dejinta iyo tilmaamaha tallaabo-tallaabo ee buuxa ayaa hoosta lagu muujiyay.
Soo degso darawallada USB-ga ee ugu dambeeyay Samsung Galaxy S9 / S9 Plus:
Waxaad arki doontaa: Samsung Odin Flash Tool Dhamaan noocyada.
Hagaha loo rakibo darawalada USB:
Ka soo dejiso xirmada USB-ka ugu dambeeyay ee Galaxy S9 iyo S9 Plus xagga sare.
Markaad soo dejiso, hadda midigta riix oo ku soo bixi WinRAR ama 7zip.
Hadda laba jeer guji oo fur faylka la soo saaray (SAMSUNG_USB_Driver_for_Mobile_Phones.exe).
Daaqad soosaara ayaa kasoo muuqan doonta kontaroolada akoonka isticmaalaha oo weydiinaya “haa” ama “maya”, dhagsii “haa” kadibna raac sawirka si aad u rakibto:
dooro luuqaddaada iyo dalkaaga
Xulo goobta rakibaadda
Sug sugida rakibida.
Markaad dhammeysid ku xiridda aaladda kumbuyuutarka ama laptop.
Sidoo kale jecel: Sida loogu rakibo TWRP Recovery qalabyada Android ee ugu dambeeyay.
Tani waa hage guud si loogu rakibo Samsung Galaxy USB S9 / Plus darawallada. Waxaan rajeyneynaa inuu hagahan si fiican kuu caawin doono. Haddii aad ka fiirsaneyso inaad wax ku soo kordhiso boggan, fadlan ku qor qaybta faallada ee hoose.